Ugu yaraan 25 oo ku geeriyooday qarax is-miidaamin ah oo ka dhacay caasimada Suuriya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldUgu yaraan 25 oo ku geeriyooday qarax is-miidaamin ah oo ka dhacay caasimada Suuriya
March 15, 2017 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Ugu yaraan 25 oo ku geeriyooday qarax is-miidaamin ah oo ka dhacay caasimada Suuriya. [Xigashada Sawirka: Anadolu]
Dimishiq-(Puntland Mirror) Ugu yaraan 25 qof ayaa lagu dilay qarax is-miidaamin ah kaasoo maanta oo Arbaco lala eegtay dhisme weyn oo maxkamadeed oo kuyaala gudaha caasimada dalka Suuriya ee Dimishiq, sida ay ku warantay wakaalada wararka dowladda Suuriya ee SANA.
Qof isa-soo miidaamiyay ayaa isku qarxiyay gudaha xarunta maxkamada oo kutaala degmada Hamidiyah ee bartamaha Dimishiq, sida ay sheegtay wakaalada wararku.
Sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka, tobonaan qof oo kale ayaa ku dhaawacmay weerarka.
Ma jirto cid wali sheegatay masuuliyada qaraxa.
Weerarka maanta oo Arbaco ah dhacay, ayaa ku soo beegmaya lix sanno kadib markii uu bilaabmay dagaalka Suuriya, kaasoo bilaabmay bartamihii bishii Maarso ee sanadkii 2011-kii, kadib markii kooxo mucaaradsan rajiimka Madaxweyne Bashaar Al-asad ay hubka qaateen si ay xilka uga tuuraan isaga.